VaTsvangirai Voshora Mapurisa, Mauto, neVasori Vanotyora Kodzero dzeVanhu
Mutungamiri wehurumende, VaMorgan Tsvangirai, vashoropodza masoja, mapurisa pamwe nevasori vanonzi vari kutumirwa kumaruwa kunoshungurudza vanhu pamberi pesarudzo idzo dzinonzi dzinogona kuitwa gore rinouya.
VaTsvangirai vakurudzirawo vanhu kuti vapinde mumigwagwa vachiratidzira kana vachinge vatyorerwa kodzero dzavo nehurumende chero nani zvake.
VaTsvangirai vataura izvi pamhemberero dzekucherechedza zuva rekuremekedzwa kwekodzero dzevanhu dzaitwa muHarare neChishanu idzo dzarongwa nesangano rinorwira kodzero dzeveruzhinji reZimbabwe Human Rights Association, kana kuti ZimRights.
Va Tsvangirai vati vanhu vanofanira kupihwa mukana wekusarudza hurumende yavanoda vasingambunyikidzwe.
Kunyange hazvo VaTsvangirai vakurudzira kuti masoja, mapurisa nevasori kuti vasapindira munyaya dzezvematongerwo enyika, nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika, VaHopewell Gumbo, vati havaoni Zanu PF ichizoregedza kushandisa vanhu ava kutsvaga rutsigiro.
Vachitaurawo pamhemberero idzi, mutevedzeri waVaTsvangira muhurumende, Va Arthur Mutambara, vati pane zvinhu zvizhinji zvinoda kugadziriswa sarudzo idzi dzisati dzaitwa.
VaMutambara vati kana sarudzo idzi dzikaitwa pasina chagadziriswa, zvakafanana nekudzosera vanhu munguva yesarudzo dzakaitwa muna Chikumi 2008.
VaMutambara vashora mutungamiri wenyika, VaRobert Mugabe, nekusavapo pamhemberero idzi vachiti izvi zvinoratidza kuti havana kuzvipira kuremekedza kodzero dzevanhu.
Sachigaro we ZimRights, Va Kucaca Phulu, vashora komiti yehurumende inoona nezvekupodzwa kwemaronda, vachiti haina
zvairi kuita munyaya dzekupodza maronda akaunzwa nesarudzo dzemuna 2008.
Vakurudzira kuti patorwe matanho pavanhu vose vakatyora kodzero dzevanhu munguva iyi.
Pamhemberero idzi, nhengo dze ZimRights dzasvitsa gwaro renyunyuto dzine chokuita nekutyorwa kwekodzero dzevanhu kuna Va Tsvangirai.
Gwaro iri rakurudzira hurumende kuti ione kuti mhirizhonga pamwe nekutyorwa kwekodzero dzevanhu zvamiswa.
Vanhu vanodarika chiuru nemazana mashanu varatidzira vakapfeka hembe nhema kubva pamahofisi e ZimRights kusvika pa Africa Unity Square apo panga pachiitirwa mhemberero idzi.
Varatidziri ava, avo vanga vachisanganisirawo mutevedzeri wegurukota rinoona nezvemadzimai, Muzvare Jessie Majome, vanga vakatakura zvinyorwa zvakasiyana siyana.